Warshadda xannibaadda cabbirka caddadka ee Shiinaha iyo soosaarayaasha | CAQLI
Block Gauge sax ah
Buug -gacmeedyada (oo sidoo kale loo yaqaanno gage blocks, Johansson cabbirrada, cabbirrada siibashada, ama baloogyada Jo) waa nidaam lagu soo saaro dherer sax ah. Xayndaabka cabbiraadda shaqsiyeedku waa bir ama dhoobada dhoobada oo ahayd dhul sax ah oo laalaabtay dhumuc gaar ah. Baloogyada cabbirku waxay ku yimaadaan qaybo baloogyo leh oo leh dherer caadi ah oo kala duwan. Marka la isticmaalayo, baloogyada ayaa la is dulsaaray si loo sameeyo dhererka la rabo (ama dhererka).
Tilmaam muhiim ah oo ka mid ah baloogyada cabbiraadda ayaa ah in la isku dari karo hubin la'aanta cabbir ahaan aad u yar. Baloogyada waxaa ku soo biiraya geedi socod siibasho ah oo la yiraahdo wringing, kaas oo sababa in sagxadoodu aad u fidsan tahay ay isku dhegaan. Tiro yar oo ah baloogyada cabbiraadda ayaa loo isticmaali karaa in lagu abuuro dherer sax ah gudaha baaxad ballaaran. Adigoo adeegsanaya 3 baloog waqti laga soo qaatay 30 baloog, mid ayaa laga yaabaa inuu abuuro mid kasta oo ka mid ah dhererka 1000 laga bilaabo 3.000 illaa 3.999 mm gudaha 0.001 mm tallaabooyin (ama 0.3000 illaa 0.3999 inji oo ah 0,0001 inji). Baloogyada cabbiraadda waxaa soo alifay 1896 -kii mashiinkii reer Sweden Carl Edvard Johansson. Waxaa loo adeegsadaa tixraac si loo qiyaaso qalabka cabbiraadda ee lagu isticmaalo dukaamada mashiinnada, sida micrometer -ka, baararka sinjiga, calipers, iyo tilmaamayaasha garaaca (marka loo adeegsado door kormeer). Baloogyada qiyaasta ayaa ah hababka ugu muhiimsan ee jaangooynta dhererka ee warshaduhu adeegsadaan.
Hore: Shaxda dahaaran ee Optic
Xiga: Sax Birta Machining
Isbarbar dhigyada Granite Precision, Sax Granite Cube, La taaban karo Epoxy, Qalinka Granit Square Ruler, Sax Granite, Sax Granite dusha sare,